महिला हिंसा गर्ने गिरी को हुन् ? गिरीले कर्मचारीको मुखमा थुकेको घटना सार्वजनिक - www.biratsandesh.com
अस्ट्रेलिया पुग्यो विश्वकपको सेमिफाइनलमा
बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा सूर्योदय नगरपालिकाका उपप्रमुख बेहोस
विराटनगरका मेयर पराजुलीले ल्याए लोकप्रिय बजेट
अन्तत: राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता
महिला हिंसा गर्ने गिरी को हुन् ? गिरीले कर्मचारीको मुखमा थुकेको घटना सार्वजनिक
विराटनगर, १३ असार । विराटनगर–८ की एक महिलाको औंला टोकेर विवादमा मुछिएका टेकबहादुर गिरीका पुराना घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भन्न रूचाउने गिरीले यसै साता छिमेकी संगीता पोखरेलको कान्छी औंला टोकेपछि घटनाले उग्र रूप लिएको हो । गिरीले संगीताको औंला टोकेरै टुक्रा पारिदिएका छन् । न्यूरो अस्पतालको उपचारपछि उनी घर फर्किएकी छन् । यस प्रकारको हिंसाको महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले निन्दा र भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । रूखो स्वभावका गिरी जहाँ रहन्छन् त्यहाँ विवाद हुने छिमेकीहरू बताउँछन् ।
वि.सं. २०२८ सालदेखि अन्तशूल्क, राजस्व र भन्सार कार्यालयमा काम गरेर केही वर्षअघि सेवानिवृत्त भएका गिरीले धम्काएरै जागिर खाएको बुझिएको छ । वि.सं. २०५० सालमा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा रहँदा आफ्नै सहकर्मी खरिदार स्तरका एक कर्मचारीलाई मुखमा थुकेका थिए । “कांग्रेस आवद्ध कर्मचारी युनियनको चुनावको मतगणना चलिरहेको थियो, सामान्य विवाद हुँदा गिरीले अध्यक्षका प्रत्यासी नवराज सुवेदीको मुखमै थुकेपछि कुटपिट सुरु भयो,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा छिमेकीले भने, “गिरी जहाँ रहन्छन् त्यहाँ विवाद वा कुटपिट हुने गर्छ । अहिले विराटनगरको शान्ति चौकको अवस्था यस्तै छ ।” राजस्व कार्यालयमा लामो समय बसेर प्रशस्त धन आर्जन गरेका गिरीले तर्साएर, धम्काएरै धन आर्जन गरेको बुझिएको छ । विराटनगर भन्सारमा खरिदार पदमा रहँदा पनि उनको फूर्ति यस्तै थियो । नजिकका एक कर्मचारीले भने, “कार्यालय प्रमुखहरूलाई धम्काएरै ठूला कम्पनीहरूको जाँचपास गर्थे । ठूला कम्पनीको फारम जाँच गर्दा धेरै पैसा आउँथ्यो प्रमुखलाई धम्काएरै प्रशस्त धन आर्जन गरेका हुन् उनले ।”
नागरिक समाज र दशनामी संघको जिम्मेवार पदाधिकारी भएर बसेका गिरीको रवैयाप्रति आफ्नै साथीभाइ पनि खुसी छैनन् । घटनाअनुसार टेकबहादुर र संगीता छिमेकी हुन् । बिहान हुने बित्तिकै कुकुर डुलाउने गरेका गिरी सधैं स्थानीय विभिन्न व्यक्तिकै घरअगाडि कुकुरलाई शौच गराउथे । उनका विरुद्धमा कोही छिमेकी बोल्नेसम्म हिम्मत गर्दैनन् । धेरैपटक यस्तै घटना दोहोरिएपछि संगीताका श्रीमान कविरचन्द्र शर्माले मुख खोल्न बाध्य भए । घरअगाडि कुकुरलाई शौच गराइरहेको बेला त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गर्दा गिरी एक्कासि जाई लागे । कुकुर डुलाउँदा सधैं लठी लिएर हिंड्ने गिरीले त्यो आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरी मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्न थालेपछि छुट्याउन पुगेकी संगीतालाई औंलो टोकेर टुक्रा पारिदिए । घाइते भएकी संगीतालाई तत्कालै न्यूरो अस्पताल लगियो ।
सडक अतिक्रमण गरेर नगरक्षेत्र व्यवस्थित गर्न लाग्दा महानगरपालिकाविरुद्ध उनले त्यो बेला सोझासाझा जनतालाई उचालेर काममा अवरोध पुर्याएका थिए । ‘मुटुको बिरामी हुँ’ भन्दै गिरी अस्पतालमा उपचार गराएर प्रहरी हिरासतमा बस्न मानेका छैनन् । स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर उनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रहरीले महिला हिंसाको घटना भएकाले गिरीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : १३ असार २०७५, बुधबार १८:१२
फ्लोरिडाको सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु
बर्दिबासमा ट्याक्टर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
मोरङका खेलाडीलाई हाइलाइफको साथ
इटहरी, जकनपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति
आफैले बोकेको राइफल बन्दुक पड्किँदा प्रहरी जवान गम्भीर घाइते
‘बुम्राह विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी’: सचिन तेन्दुलकर
विराटनगर १० असार । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले जनता माझ गरेको बाचा अनुसारको बजेट...
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको छ। गुठियारहरुको अधिकार स्वत:...
डच भलिबल प्रशिक्षक हान नेपाल आउँदै
विश्वकप क्रिकेट: अफगानिस्तानलाई हराउँदै इङ्ल्याण्ड शीर्ष स्थानमा उक्लियो
विहारमा तापक्रम ४५ डिग्री, तीन दिनमा १३८ जनाको ज्यान गयो
दक्षिण अफ्रिकाको विश्वकप यात्रा समाप्त
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै साविक विजेता टोली अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने पहिलो टोली बनेको छ...
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा आज बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।...
२१ बर्ष पछी ‘सिआईडी’ बन्द हुँदै
लेनदेनका कारण कपडा व्यवसायीको हत्या भएको खुलासा
राष्ट्रपति भण्डारी अमेरिका प्रस्थान
कोइराला भन्छन “पुरानो सोचले पार्टी चल्दैन”
इटहरीका मेयरको नेकपाबाटै विरोध, आत्मालोचना गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सुझाव
प्रेस युनियन मोरङद्वारा तीन पुरस्कार घोषणा
रिजाल वानको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित